सक्कली मानहरूमा चयन गरिएको वस्तुको साइज सेटिङस फेरि सुरु गर्नुहोस्.
यो विकल्प फ्रेमहरूका लागि उपलब्ध छैन.
फ्रेमको सामाग्रीहरू सँग जोडा मिलाउन फ्रेमको चौडाइ वा उचाइ स्वचालित रूपमा समायोजन गर्नुहोस्. यदि तपाईँं चाहनुहुन्छ भने, तपाईँं फ्रेमका लागि न्यूनतम चौडाइ वा न्यूनतम उचाइ निश्चित गर्न सक्नुहुन्छ.
स्वचालित विकल्प मात्र उपलब्ध हुन्छ जब तपाईँंले फ्रेम चयन गर्नुहुन्छ.
हालको पृष्ठमा चयन गरिएको वस्तुको स्थान निश्चित गर्नुहोस्.ला पृष्ठ.
समानला पृष्ठहमा ऐनारु
स्थिर उचाइ सँग फ्रेममा वस्तु यदि तपाईँंले एङ्कर गर्नु भयो भने, मात्र "Bottom" र "Center" पङ्क्तिबद्व विकल्प उपलब्ध हुन्छ.
ढाँचा - एङ्कर
Title is: टाइप